သိန်း ၁,ဝ၀ဝ ဝန်းကျင်ဖြင့် အရောင်းဖွင့်နေသော မန္တလေးဈေးချိုအနီးက အဆာဟိကွန်ဒိုအခန်းများ - Myanmar Builders Guide
All Categories 3rd Party Inspection Air Conditioning Aluminium Architect Banks [Govt.] Banks [Overseas] Banks [Private] Bath & Toilet Building Materials Carpets, Canvas & Linoleum Ceiling Cement Ceramics Civil and Structure Cleaning Cleaning Equipment Concrete Products Concrete [Ready-Mix] Concreting Equipment Condo Salesroom Construction Materials Construction Services Consultants [Construction] Contractor Crane Curtains Decoration Designers [Interior] Doors and Shutters Earthwork Electrical Goods Electronic & Electrical Home Appliance Electronics Fire Fighting Floor, Wall Formwork & Scaffolding Galvanized Iron Sheets Gas Pipe Installation Gates and Fence Generator & Transformer Geo-Engineering Glass Hardware Tools Heavy Equipment Home Furnitures Insulation Iron Kitchenware & Appliances Landscaping Legal Consultants Lifting Lifts & Esclator Lighting Lime Machinery Spare Parts Mechanical & Electrical Metal Door Moving Services Office Furnitures Office Use Painters Paints Parquet Pesonal Protective Equipment Piling Pipes & Accessories Plastic Plumbing Polish Project Management Property Management PVC Products Quantity Surveyor Real Estate Agents Refined Wood Roofs Sand, Brick & Aggregates Sandpaper Security Security & CCTV Sign Board Solar Energy Stainless Steelwares Steels and Metals Survey Survey Instruments Swimming Pool Tarmac Telecommunication Timber Tools Wallpapers Water System Water Tank Waterproofing Welding Well-Drilling Wire and Cable Wooden Product
Choose Location Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Hmaw Bi Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Than Lyin Tarmwe Thaketa Thingangyun Thuwana Yankin Aung Myay Thar San Amarapura Chan Aye Thar San Chan Mya Thar Si Mahar Aung Myay Pyi Gyi Tagon Pyin Oo Lwin Sagaing Sintgu Madayar Myintnge Monywa Palate Patheingyi kyaukse Tadaoo
KT Construction မှတည်ဆောက်နေသော အဆာဟိကွန်ဒို အခန်းများကို မတ် ၁၅ မှ ၁၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ အထိ မန္တလေးမြို့ ဘူတာကြီးအပေါ်ရှိ Hotel Marvel၊ အမရပူရ ခန်းမတွင် အရောင်းပြပွဲပြုလုပ်၍ စတင်ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကွန်ဒိုစီမံကိန်းသည် မန္တလေးမြို့ ၏အထင်ကရဖြစ်သော ဈေးချိုအနီးတွင် တည်ရှိပြီး ကွန်ဒိုဥပဒေနှင့်အညီ ဝယ်ယူသူများအား မြေအချိုးကျပိုင်ဆိုင်ခြင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။ တစ်ဧကကျယ်ဝန်းသော ဂရန်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ၉၇၅ sqft မှ ၁၄၆၆ sqftအထိ ကျယ်ဝန်းသောအခန်းများကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမ၊ ကားပါကင်၊ ဓာတ်လှေ ကား၊ Rooftop Garden ၊ Barbeque Terrace စသည့် ကွန်ဒို Facilities အပြည့်အစုံ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
<< မြရည်နန္ဒာ တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာတွေကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဘယ်လိုမျိုး ရောင်းချပေးနေပြီလဲ??? >>
အဆိုပါစီမံကိန်းတွင် လူနေအိမ်ခန်းပေါင်း ၁၉၂ ခန်း၊ မော်တော် ယာဉ် ၁၇၁ စီးခန့်အတွက် ကားပါကင်၊ ဆိုင်ကယ်ပါကင်အစီး ၃၀ဝ ခန့် ထည့်သွင်းနိုင်ရန် ဆောက်လုပ်ထားသည်။ မြေအောက်ပါကင်နှစ်ထပ် ပါဝင်ပြီး၂၄ နာရီ လုံခြုံရေးစနစ်များလည်း ပါဝင်သည်။
Read 210 times	Last modified on Friday, 15 March 2019 14:47
ယာဉ်မရပ်ရ ဆိုင်းဘုတ်ချထားသည့် အိမ်ပိုင်ရှင်များ အခွန်ဆောင်ရတော့မည့် မန္တလေး
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ပါဝင်သော ECO Green City လုပ်ငန်းများ စတင်
ပဲခူး - ပုဇွန်တောင်ရထားလမ်းပိုင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း စတင်ဆောင်ရွက်နေ
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းနှင့်အတူ ဘာတွေကိုပေါင်းစပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေတာလဲ???
ဟံသာဝတီလေဆိပ်ကို ဂျပန်အကူအညီဖြင့် ဆက်ဆောက်မည်
Copyright © 2019 Myanmar Builders Guide .. All Rights Reserved.